Xafiiska Dacwada & Tarbiyada ee Soomaaliya.
Hay’addaan oo ay madax ka tahay naag Jarmal ah oo lagu magacaabo Magdi oo uu qabo qof Soomaali ah ayaa xilli maalin ah si caddaan ah ugu qaybisay walxahaan gaalnimada ah ardada magaalada Marka hal school oo maamulihiisii diiday mooyee. Haddaba arrinta la yaabka lihi waxay tahay sida ay hay’adaani ugu dhiirratay inay gaalnimo cad u qaybiso ubadkii muslimiinta ayadoo waliba joogta dhulkoodii, waxaase ka yaab badan sida aysan reer Marka uga gilgilan xadgudubkaan aadka u foosha xun. Waxaa wax aad looga murugoodo ah inaynu ka dhiidhiyi wayno wax aan lagula kici karin dadkeenna jooga dhulka gaalada, sida la wada ogyahayna xataa gaalada ilmeheeda dhigta school-lada waxaan oo kale laguma sameeyo, haddaba su’aashu waxay tahay ma innagaa kirishtaanimada uga dhaw gaaladii haysatay, maxaa keenay inaynu carruurteenna uga aamusno wax gaaladu u diideen dhallaankooda???
Tallaabooyinkaas waxay bulshada Soomaaliyeed ku gaartay guulo ay waayeen qaar badan oo ka mid ah bulshooyinka muslinka ah oo aakhirkii dadkoodii qaybo badani ay gaaloobeen ka dibna la safteen gumaysigii. Waxaase baryahaan dambe ku soo kordhay bulshada Soomaaliyeed in ay khayr ka fishaan gaalada ayagoo ku andacoonaya inay ka helaan kaalmo caafimaad, waxbarasho & samafal kale, dhab ahaanse dadkeennu gaalada waxay ka helaan kaalmo ku sheeg aan wax tarayn dhibna u gaysanaysa, sida: wax lagu gaaloobayo, wax akhlaaqda & sharafta dhuminaya, wax niyadda ka dilaya, wax dhaqaalahooda lagu burburinayo. Dhan kale haddii laga eegase qofka muslinka ah marna uma bannaana kumana habboona inuu diintiisa siisto luqmad caysh ah si kastoo uu u baahan yahay, Soomaaliduna waxay dhahdaa: waa baahnahay bakhtiga looma cuno. Dadka Soomaaliyeedna waaya aragnimo badan ayuu u leeyahay dhalanteednimada aduunyada, maxaa yeelay 13 sano gudohood waxay arkeen dad badan oo dhawr goor dhacmay. Waxaas oo dhan waxaa ka daran cadaabka lagu waarayo oo aakhiro sugaya qofkii gaalooba & ciqaabta uu mudanayo ninkii ahalkiisa ka ilaalin waaya gaalnimo.
Ugu dambayn waxaan ugu baaqaynaa Dalladda culumada Soomaaliyeed, Ururrada islaamiga ah ee Soomaaliyeed, Maxkamadaha islaamiga ah, Dawladda ku meelgaarka ah, Dalladaha waxbarashada, bahda warbaahinta, dadwaynaha ku nool gobolka sh/hoose gaar ahaan magaalada Marka & dhammaan dadwaynaha Soomaaliyeed waxaan ugu baaqaynaa in ay u istaagaan difaaca diintooda & badbaadinta dalka iyo dadkooda. Waxaana rajaynaynaa inay dhacdadaani noqoto mid fure u noqota hawl wayn oo aan loo kala harin.
QORAALADII HOREE EE XAFIISAKA DACWADA
Afeef: Aragtida qoraalkan waxaa leh xafiiska Dacwada iyo Tarbiyada ee Soomaaliya